Varombo vakanga kunyange varipo kuti akawa patafura, uye saizvozvo aida vapfumi vane mvura. "Anyike muromo womunwe wake mumvura ..." Haana kukumbira zvikuru, asi pakanga pasina kuti vawane.
The mupfumi vakabudawo yake zvakanaka paaiva mupenyu, asi zvino ndichaenda kuwana vanhu vakaipa. The zvakaipa zvino vakamubata.
Kana akararama Razaro, iye akabuda yake zvakaipa, asi zvino iye unenge kuwana chake chakanaka. Iye wakagadzirirwa, auya kumusha kurudyi kunzvimbo.
"Zvino, iye unonyaradzwa, uye iwe anopisa"
In kudenga, pane kunyaradzwa. It inzvimbo chinonyevenutsa nezororo. Asi hero inzvimbo yokutambudzwa.
Chii nzvimbo Unoda kuenda? Plågans nzvimbo kana nyaradzo nzvimbo?
Zviri pano panyika yaunosarudza. Kana uchida kuwana kunyaradzwa nzvimbo, unofanira kugamuchira Jesu.
Sezvo nguva yapera.
Vaya vakagamuchira Jesu